China UHP600 Shida Carbon Graphite Electrode Manufacturer and Supplier |DEYI
Kedu ihe bụ akụrụngwa nke electrode graphite gị?
Shida na-eji coke agịga dị elu ebubata na USA, Japan na UK.
Kedu nha na oke nke electrode graphite ị na-emepụta?
Ka ọ dị ugbu a, Shida na-emepụta electrodes graphite dị elu site na UHP500mm (UHP20") ruo UHP700mm (UHP28") nke nwere ike iji na ọkụ ọkụ eletrik.The nnukwu diameters, dị ka UHP700,UHP650 na UHP600, na-enweta ezi nzaghachi si anyị ahịa.
Kedu maka mbukota gi?
Ihe ngwugwu anyị bụ osisi a na-eme ma anyị nwere ike ịnye ụzọ mbukota dị iche iche, dị maka mbupu ụgbọ mmiri, ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala.Ọ bụrụ maka mbupu oke osimiri, enwere ike itinye fumigation ọkọlọtọ mba ụwa.
Ihe mkpuchi Carbon Shida na akụkụ Nipple (4TPI)
Dayameta oghere oghere (mm)
Nnukwu dayameta ara (mm)
Ogologo ọnụ ara (mm)
Omimi oghere (mm)
Ogologo eriri oghere (mm)
Nke gara aga: UHP550 Shida Carbon Graphite Electrode
Osote: Graphite Electrode ntụ ntụ